Coronavirus (Covid-19) oo Muqdisho lagu arkay qof qaba - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Coronavirus (Covid-19) oo Muqdisho lagu arkay qof qaba
Coronavirus (Covid-19) oo Muqdisho lagu arkay qof qaba
MOGADISHU (Walwaal.com) – Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in ay noqotay waddankii afraad ee kuyaal bariga Africa oo lagu arkay qof qaba caabuqa Corona. Wadamada kale ee lagu arkay ee kuyaal bariga Africa waa Kenya, Ethiopia & Rwanda.
Wasiirka wassarada caafimaadka Marwo Foosiya Abiikar ayaa ku cadaysay warsaxaafadeed ay qabatay in cudurka laga helay mid ka mid ah afar qof oo dhowaan waddanka kusoo laabtay balse lagu karantiimay meel wassaaradu hore ugu qorshaysay, dadkaa la karintiimay waxay ahaayeen kuwo kasoo laabtay dalka shiinaha. Waxayna sheegtay in saaka mid ka mid ah dadka laga helay cudurka. Waxayse dadka ugu baaqday in lays dejiyo lana taxadaro.
Soomaaliya maanta oo isniin ah waxay ka midnoqotay 150 waddan ee lagu arkay xanuunka corona vuris ee dabayaaqadii kal hore ka dilaacay magaalada Wuhun ee cariga Shiinaha.
Docda kale waxgaradka iyo aqoonyahana soomaaliyeed waxay dowlada ugu baaqeen in la joojiyo duulimaadyada iyo badeecadaha ka yimaada waddanka kiiniya gaar’ahaan qaadka oo si fudud wadanka ugu fidin kara cuddurka. Walwaal.com wuxuu dadwaynaha soomaaliyeed ku waaninayaa in ay aad isu ilaashaan nadaafadana aad ugu dedaalaan.
Previous articleGORFEYNTA BUUGGA GARASHO
Next articleBARASHADA BURJIYADA